Sidee loo dhoofiyo music ka iPhone in iPod, iPad iyo iPhone
> Resource > iPhone > Keenista music ka iPhone in iPod, iPad iyo iPhone
Weligaa aad soo gaarto xaaladaha: aad hantiyi 3GS iPhone iyo iPod ah oo aad rabto inaad nuqul ka music ka iPhone 3GS in aad iPod, sidaas Waxaad dhegaysan kartaa music aad jeceshahay aad iPod? Ama waxaad ka iibsan iPad cusub, si aad rabto in lagu wareejiyo aad iPhone music aad iPad. Si kastaba ha ahaatee, kaliya aad u ogaato in dhammaan faylasha music ma aha in Lugood iyo aan kuu soo gudbin karaa music iPhone in aad iPod ama iPad by syncing aad iPod ama iPad la Lugood.
Xaaladdan oo kale, waxaa laga yaabaa in aad dareento waxa ay arrin adag tahay in la soo dhoofsadaan music ka iPhone haddii aad caawimo u faa'iido badan ka qalab dhexe hesho. Halkan yimaado music iPhone kala iibsiga xirfad leh, Wondershare TunesGo . Waxay kaa caawin kara dhaqaaqin music ka iPhone in aad iPad, iPod ama iPhone muuqan. Music ka sokow, aad xitaa wareejin karaan videos, music videos, Podcast, Lugood U iyo audiobook dhexeeya iPhone, iPad iyo iPod aad.
2 tallaabooyin ay ku soo bixi music ka iPhone in iPod, iPad iyo iPhone
Download this music kala iibsiga iPhone oo raac talaabooyinka soo socda ee hoos ku. Waxaa kugu hanuuniyo sidii ay u guuraan music ka iPhone in iPad, iPod iyo xataa kale iPhone.
Tallaabada 1. Isku aad iPhone iyo iPod, iPad iyo iPhone kale si PC
Si aan ku bilaabo, waxaad u baahan tahay si loo soo dajiyo iyo abuurtaan TunesGo. Markaas xiriiriyaan iPhone iyo iPod / iPad / iPhone in aad rabto in aad soo dhoofsadaan music inay waqti isku mid ah. Marka ay ku xiran yihiin, kala iibsiga iPhone this isla markiiba iyaga lagu ogaan doonaa. Iyo xeesha aad la soo bandhigi doonaa furmo suuqa hoose.
Fiiro gaar ah: Wondershare TunesGo waa macruufka socon 6 iyo taageerada hindisooyin badan Apple sida iPhone 5, iPad iyo iPod mini xiriiri 5.
Tallaabada 2. kaabta music ka iPhone in iPod, iPad iyo iPhone
Hadda, guji "Media" hoos buugga iPhone. Markaas in line ugu sareeya, guji "Music" inay soo qaadaan suuqa kala music ah. In uu furmo suuqa music ah, guji saddexagalka hoos "Dhoofinta in" ka dib dooranaya files music. In ay menu jiido-down, sida aad ka arki karto, waxaa jira qaar ka mid ah doorashada; waxaad dooran kartaa in dhoofin music aad iPod, iPad, iyo iPhone.
The wareejinta kaliya aad qaadan doonaa wax ka yar hal daqiiqo. Marka wareejinta ah uu dhamaado, waxaad riixi kartaa iPad, iPod, ama wax kale iPhone in ay leeg- ka tagay si uu u hubiyo music ah laga keeno.
Si aad u daacad ah, marka laga reebo soo celinta music ka iPhone in aad iPad, iPod, ama wax kale iPhone, TunesGo noqon kartaa mid caawisa oo ku wanaagsan in ay maareeyaan xiriirada aad iPhone. Waxaad dajiyaan karaa iyo xiriirada dhoofinta dhaxeeya iPhone iyo computer, midowdo xiriirrada nuqul kooxaha magaca, telefoon iyo email. Si aad u la yaab leh, kuwaasoo ah idinka ee karo xiriirada u hagaagsan in aad iPhone la Outlook .
Solutions Full in dayactir All macruufka Your 9 Dhibaatooyinka / Khaladaadka